AMISOM oo la hadashay khasaaraha weerarkii Alshabaab ku qaadeen Xalane – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 26 December 2014
Mareeg.com: War-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa lagu cambaareeyay weerarkii Alshabaab shalay ku qaadeen xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in shalay xilligii qadada ay Alshabaab isku dayeen ineey galaan xarunta aadka loo ilaaliyo ee Xalane, halkaasoo ay kala kulmeen dagaal culus.
Warka ayaa intaasi ku daray in raggi weerarka soo qaaday 5 ka mid ah la dilay, halka 3 ka mid ah la sheegay in nolosha lagu qabtay.
AMISOM ayaa xaqiijisay in weerarkii shalay ay ku geeriyoodeen 3 ka mid ah ciidanka AMISOM iyo qof rayid ah, waxeyna AMISOM tilmaantay in ammaanka xarunta ay xasiloontahay islamarkaasna ay ciidamada Midowga Africa iyo shaqaalaha UN-ka ay bed qabaan.
Wakiilka Midowga Africa u qaabilsan Soomaaliya Maman S. Sidikou ayaa aad usoo dhaweeyay sida dhiifoonaanta leh ee ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM uga hortageen weerarka lagu soo qaaday xarunta Xalane.
Amb. Sidikou ayaa uga tacsiyeeyay ehelada iyo qaraba dadkii ku waxyeeloobay weerarkii shalay lagu qaaday xarunta Xalane, isagoo hoosta ka xariiqay in dadkaasi ay u geeriyoodeen difaaca dalka ayna galeen taariikhda Soomaaliya.
Wakiilka ayaa hoosta ka xariiqay in weerarada noocan oo kale ah aysan marnaba hakad gelineynin howsha ay Midowga Africa iyo beesha caalamku ku garab taaganyihiin dowladda iyo dadka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Xasan: Waxaa jira wasiiro hore oo aan looga maarimin xukuumada cusub!